ဂျပန်ပြည်က အရင်လား...မြန်မာပြည်က အရင်လား...၊ အတူတူဘဲလား...။ - Thutazone
ဂျပန်ပြည်က အရင်လား…မြန်မာပြည်က အရင်လား…၊ အတူတူဘဲလား…။
By ThutammPosted on January 14, 2018 January 14, 2018
ရေးသားသူ – ဌေးဇော်(အင်းဝ)
ငလျင်ဆိုတာ ဘယ်ပညာရှင်မှ လှုပ်မဲ့အချိန်မခန့်မှန်းနိုင်ကြပါ၊ ငလျင်လှုပ်ပြီးမှသာ တိုင်းတာလို့ ရကြပါတယ်။ သို့သော် ပညာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရ အနှစ်(၈၀)ကနေ အနှစ်(၁၀၀)အတွင်းမှာ (magnitude ၇အထက်-၈-၉)လောက်ရှိတဲ့ ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်ခတ်တတ်တယ်လို့ ပညာရှင်အများစုက သီအိုရီထုတ် ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။ နောက်ပညာရှင်တချို့က အနှစ်(၁၀၀ကနေ ၁၆၀)အတွင်း တကျော့ပြန် လှုတ်ခတ်တတ်တယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်။ ဒီတော့ နှစ်၁၀၀-ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း တကျော့ပြန် လှုပ်ခတ်မှာတော့ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ကြပါဘူး။
ဒီတော့ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်မှာ လာတော့မယ်ပြောတဲ့ ငလျင်ကြီးတွေကို လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ငလျင်ကြီးတွေ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်က ဘယ်လောက်ပြင်းအားနဲ့ လှုပ်ခတ်သွားသလဲလေ့လာရင်
၁ ။ ။ ၁၈၃၉ ခု၊ မတ် ၂၁ နဲ့ ၂၃ တုန်းက လှုပ်ခဲ့တဲ့ အင်းဝ ငလျင်။ အင်းဝ၊ အမရပူရနဲ့ စစ်ကိုင်းတို့မှာ လူ ၃ဝဝ-၄ဝဝ သေတယ်။ မြို့ရိုးပြာသာဒ်နဲ့ နန်းတော်ဟောင်းတွေပြိုတယ်။ မြို့ထောင့်စေတီတွေလဲပြိုတယ်။ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး ပျက် စီးတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ငလျင်ငယ်တွေ ခြောက်လ လောက်ဆက်လှုပ်ခဲ့သတဲ့။
၂ ။ ။ ၁၉၁၂ ခု၊ မေ ၂၃ မှာ လှုပ်တဲ့ မေမြို့ငလျင်။ J.C Brown (၁၉၁၄) က ဒါဟာကျောက် ကြမ်း ပြတ်ရွေ့ကြောင့်လို့ပြော တယ်။ ရစ်ခ်ျတာပမာဏ(၈) လောက်ရှိတယ်။ လူနေကျဲပါး တဲ့နေရာမှာ လှုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပျက်စီးမှုနည်းတယ်။
၃ ။ ။ ကျောက်တန်းပြတ်ရွေ့ ကလည်း ၈ ဒသမ သုည ရစ်ခ်ျတာစကေးရှိတဲ့ ငလျင်ကြီးက ၁၉၁၂ ခုနှစ်က လှုပ်သွားဖူးတယ်။ ပြန်တွက်ရင် နှစ် ၁ဝဝ ကျော်သွားပြီ။ ဒါကလည်း တစ်ကျော့ပြန်လှုပ်ဖို့ နီးလာတယ်။ ဘယ်ပြတ် ရွေ့က ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လောက်ပမာဏလှုပ်မယ် ဆိုတာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရဘူး။
၄ ။ ။ ၁၉၃ဝ-မေ ၅ ရက်မှာ လှုပ် လိုက်တဲ့ ပဲခူးငလျင်။ ရစ်ခ်ျတာပမာဏ ၇.၃ ရှိတယ်။ ပဲခူးမြို့တောင်ဘက် မိုင် ၂ဝ လောက်ကို ဗဟိုပြုတယ်။ လူ ၅ဝဝ လောက် သေကြေခဲ့တယ်။ ဒါဟာ စစ်ကိုင်းပြတ် ရွေ့ရဲ့ ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှု ကြောင့်လို့ဆိုတယ်။
၅ ။ ။ ၁၉၂၉ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၃၁ ခုနှစ်အထိ ငလျင်တွေဆက်တိုက်လှုပ်ခဲ့ဖူး တယ်။ လှုပ်တဲ့ပမာဏတွေ ကြည့်ရင်လည်း ၇ ဒသမ သုည၊ ၇ ဒသမ ၃၊ ၇ ဒသမ ၆ ရစ်ခ်ျတာစကေး ရှိတဲ့ငလျင်ကြီး တွေလှုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဲဒီတုန်းကလည်း ဘုရားပုထိုးစေတီတွေ ပျက်စီးခဲ့တယ်။ လူအသေအပျောက်တွေရှိခဲ့တယ်။
၆ ။ ။ ၁၉၅၆ ခု၊ ဇူလိုင် ၁၆ ရက်မှာ လှုပ်သွားတဲ့ စစ်ကိုင်းငလျင်။ ရစ်ခ်ျတာပြင်းအား-၇ ရှိ တယ်။ လူ ၅ဝ လောက်သေ ပြီး စစ်ကိုင်းမြို့လဲ တော်တော် ပျက်သွားတယ်။
၇ ။ ။ ပုဂံငလျင်။ ၁၉၇၅ ခု၊ ဇူလိုင် ၈ ရက်နေ့မှာ လှုပ်ခဲ့တာ။ ပြင်း အား ၆.၈ ပဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေးဟောင်းဘုရား တော်တော်များများ ထိခိုက်ပျက်စီး သွားတယ်။ လူအသေ အပျောက်မရှိဘူး။
အထက်အညာဘက်ကို လေ့လာရင် ၁၈၃၉-ခုနှစ် အင်းဝငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် ၁၉၁၂-ခုနှစ် မေ၂၃ မှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ မေမြို့ငလျင်ဟာ ရစ်ချက်တာပမာဏ(၈)ရှိခဲ့ပြီး၊ အဲဒီငလျင်နောက်(အနှစ်၈၀-ပြည်ြ့ပီးပါပြီ) (၂၀၀၀-ခုနှစ်)နောက်ပိုင်း (၂ဝဝ၁ ခုနှစ် တာလေငလျင် ( ၆ဒသမ ၈)၊ ၂၀၀၂-ခုနှစ် တောင်တွင်းကြီးငလျင်(၆ ဒသမ ၈)၊ ၂ဝ၁၂-ခုနှစ်သပိတ်ကျင်းငလျင်(၆ ဒသမ ၈)၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၄ ရက် ညနေ ၅ နာရီ ၄ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့်(၆ဒသမ၈)ရှိကြတဲ့ ငလျင်အလတ်တွေ အထက်အညာဘက်မှာ လေးကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်တွေရှိခဲ့တာကြောင့် ငလျင်ကြီးကြီးတွေ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့ တထစ်ချသတ်မှတ်လို့ မရပေမဲ့ နည်းနည်းတော့ စိတ်သက်သာရာရသလို ခံစားနိုင်ပါတယ်။ (ဟိဟိ အတ္တနဲ့ ကိုယ့်ဘက်ကို ပေါ့တွေးတာ)
အောက်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကို လေ့လာရင် ၁၉၃ဝ-ခုနှစ် မေ ၅ ရက်မှာ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ပဲခူးငလျင်ဟာ ရစ်ခ်ျတာပမာဏ ၇.၃ ရှိတယ်။ ပဲခူးငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ကြီးကြီးမားမားငလျင်ကြီးတွေ တခါမှ မလှုပ်ခတ်သေးတော့ ပညာရှင်တွေရဲ့ မှတ်တမ်းများအရ အောက်မြန်မာပြည်က အတော်စိုးရိမ်သတိထားရမဲ့နှစ်တွေကို ရောက်နေပါပြီလို့ ပြောနေကြပါတယ်။
ဂျပန်မှာလဲ ငလျင်ပညာရှင်တွေက တိုကျိုဒေသအနီးတ၀ိုက်မှာ ငလျင်ကြီးလာတော့မယ်လို့ တွက်ဆထားလို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကို သတိပေးနေကြပါတယ်။
ဂျပန်ရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးကလဲ ဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ (ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၁။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြုံတွေ့ရသည့်အချိန်တွင် မြန်မာ သံရုံးအနေဖြင့် ထိရောက်စွာ ကူညီဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် ကောင်စစ် လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာ နိုင်ငံသား များအကျိုး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရာတွင် လည်းကောင်း ထိရောက် လျင်မြန်စွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ရန် အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဂျပန် နိုင်ငံရောက် မြန်မာ နိုင်ငံသားများ စာရင်းကို မြန်မာသံရုံး၊ တိုကျိုမှ ပြုစုလျက်ရှိပါသည်။)
ဒီတော့ ဂျပန်က ဘယ်လိုကြောင့်လဲ ဂျပန်ဆိုတာ ငလျင်ကျောရှိတဲ့ ကျွန်းတွေမှာ နေထိုင်ကြလို့ ငလျင် အငယ် အလတ်တွေ လှုပ်ခတ်တာ အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပါ။ ငလျင်ကြီး လှုပ်ခတ်လာရင်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တစ်ရာလောက်ကနေ ပြန်လေ့လာရလျှင်
September 1, 1923 8.3 ML 1923 Great Kantō earthquake 大正関東地震(関東大震災) Taishō Kantō Jishin (Kantō Daishinsai)လို့ပြောတဲ့ ခန်းတိုးပလိပ်နဲ့ ဟွန်ရှုးပလိပ်တို့ ပွတ်တိုက်လှုပ်တဲ့ တိုကျို ယိုကိုဟားမား ချီးဘား ရှီဇူးအိုက ခန်နဂါဝဒေသတွေမှာ လူပေါင်း ၁၄၂၈၀၀ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် လူ၄၂၈ဦးသေဆုံးတဲ့ တိုးယေားကဒေသမှ လှုပ်တဲ့May 23, 1925 6.8 ML 1925 Kita Tajima earthquake 北但馬地震 Kita Tajima Jishin ငလျင်။
လူပေါင်း၃၀၂၀ဦးသေဆုံးတဲ့ ကယောတို(ကျိုတို) တန်ငိုးဒေသဘက် လှုပ်ခတ်တဲ့ March 7, 1927 7.6 ML 1927 Kita Tango earthquake 北丹後地震 Kita Tango Jishin ငလျင်။
လူပေါင်း၂၇၂ဦးသေဆုံးတဲ့ ရှီဇူးအိုကခရိုင် အိဇူးဒေသမှာ လှုပ်ခတ်တဲ့November 26, 1930 7.3 Ms 1930 North Izu earthquake 1930年北伊豆地震 Sen-kyūhyaku-sanjū-nen Kita-Izu Jishin ငလျင်။
လူပေါင်း၃၀၀၀ကျော် သေဆုံးတဲ့ အရှေ့မြောက်အရပ် အီဝတဲ ခမအိရှိဒေသမှာ လှုပ်ခတ်တဲ့ March 2, 1933 8.4 Mw 1933 Sanriku earthquake 昭和三陸地震 Shōwa Sanriku Jishin ငလျင်။
အဲဒီနောက် ၁၉၃၆- ငလျင်၊ ၁၉၄၃- ၁၀၈၃ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၄၄- ၁၂၂၃ဦးသေငလျင်၊
၁၉၄၅- ၁၂၈၀ဦးသေ ၁၁၂၆ဦးပျောက်ဆုံးငလျင်၊ ၁၉၄၆- ၁၃၆၂ဦးသေငလျင်၊
၁၉၄၈- ၃၇၆၉ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၅၂- ၂၈ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၆၄- ၂၆ဦးသေငလျင်၊
၁၉၆၈- မဂ္ဂနီကျု့၇.၅ငလျင်၊ ၁၉၆၈- magnitude ၈.၂ရှိတဲ့ ၅၂ဦးသေငလျင်၊
၁၉၇၄- ၂၅ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၇၈- ၂၈ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၈၃- ၁၀၄ဦးသေငလျင်၊
၁၉၈၄- ၂၉ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၉၃- ၂၀၂ဦးသေငလျင်၊ ၁၉၉၄- ၃ဦးသေငလျင်၊
၁၉၉၅ခု ဇန္န၀ါရီ၁၇×ရက်နေ့မနက်၆-နာရီလောက်မှာ လှုပ်တဲ့ 7.3 Mw Great Hanshin earthquake 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) Hyōgoken Nanbu Jishin (Hanshin-Awaji Daishinsai) ကိုဘေးမှာ လှုပ်ခတ်တဲ့ ၆၄၃၄ဦးသေဆုံးတဲ့ငလျင်၊
၁၉၉၈- ပြင်းအား ၈.၃ငလျင်၊ ၂၀၀၁- ၂ဦးသေငလျင်၊ ၂၀၀၃- ၁ဦးသေငလျင်၊
၂၀၀၄- ၄၀ဦးသေငလျင်၊ ၂၀၀၅- ၁ဦးသေငလျင်၊
၂၀၀၅- ၂၀၀၆- ၂၀၀၇နှစ်တွေမှာလဲ လူမသေတဲ့ ပြင်းအား ၇-အထက်တွေ လှုပ်ခဲ့ပပါတယ်။
၂၀၀၇-မှာ ၁ဦးသေတဲ့ ငလျင်၊ ၂၀၀၇- ၁၁ဦးသေငလျင်၊ ၂၀၀၈- ၁၂ဦးသေငလျင်၊
၂၀၀၉- ၁ဦးသေငလျင်နဲ့ လူမသေတဲ့ငလျင်၊
၂၀၁၀-မှာ ၁ဦးသေငလျင်နဲ့ လူမသေငလျင်၊ ၂၀၁၁-မှာ ပြင်းအား၇.၂ရှိတဲ့ငလျင်နဲ့
၂၀၁၁-ခုနှစ် မတ်လ ၁၁-ရက်နေ့က လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ The 2011 earthquake off the Pacific coast of Tōhoku (東北地方太平洋沖地震 Tōhoku-chihō Taiheiyō Oki Jishin?) wasamagnitude 9.0ငလျင်က ဆူနာမိလှိုင်းတွေတက်လာပြီး သေဆုံးသူ ၁၅၈၉၄ဦးစာရင်းကို ရှာတွေပြီး ရှာမတွေတဲ့လူတွေ အများအပြားရှိခဲ့တဲ့ ဖူကူးရှီမားငလျင်၊
၂၀၁၁-ခုနှစ်အတွင်း လူ၁၀ဦးသေတဲ့ ပြင်းအား ၇အထက်ငလျင် လေးကြိမ် လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၂-မှာ လူ၃ဦးသေငလျင်နဲ့ လူမသေငလျင်၊ ၂၀၁၅-မှာ လူမသေ ၇.၈ငလျင်၊ ၂၀၁၆- ဧပြီ ၁၄-ရက်နေ့မှာ ပြင်းအား ၆.၂ရှိတဲ့ လူ၉ဦးသေ၊ နောက် ဧပြီ၁၆-ရက်နေ့မှာ ပြင်းအား ၇.၂ရှိ လူ၄၀သေတဲ့ ခုမမိုတိုငလျင် နှစ်ကြိမ် လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်မှာ ဒေသအမျိုးမျိုး ပလိပ်အမျိုးမျိုးကနေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လှုပ်ခတ်နေတယ်လို့ မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်ခတ်ရာမှာ ပြင်းအား magnitude- မဂ္ဂနီကျု့အပြင် မြေအနက် ဘယ်လောက်မှာ လှုပ်ခတ်သွားတယ်ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်၊ မြေကြီးအောက် အနက်တိမ်လေ ပြင်းအားကောင်းလေပါဘဲ၊ မြေကြီးအောက် အနက်များရင် ပြင်းအားပျော့သွားပါတယ်။
ဒီတော့ ပညာရှင်တွေ တွက်ချက်ထားတဲ့ အနှစ်(၁၀၀)ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ငလျင်ကြီးတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ ၁၉၂၃-ခုနှစ် စက်တင်ဘာ တစ်ရက်နေ့ တိုကျိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပြင်းအား၈.၃အဆင့်ရှိ လူပေါင်း၁၄၂၈၀ဦးသေဆုံးအောင် လှုပ်ခတ်သွားတဲ့ The Great Kantō earthquake (関東大震災 Kantō daishinsai?) struck the Kantō Plain on the Japanese ငလျင်ကြီးမျိုး တိုကျိုဒေသတ၀ိုက်မှာ တကျော့ပြန်လာတော့မယ်လို့ သတိပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလဲ မြန်မာပြည်တလျှောက်လုံးမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောင်းကြီးကနေ ၁၉၃၀-ခုနှစ် ပဲခူးငလျင်ပြီးနောက် တကျော့ပြန်လာနိုင်လို့ ပညာရှင်တွေက တွက်ဆသတိပေးနေကြပါတယ်။
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားများ ရန်အမျိုးမျိုးနဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်တွေက ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ ။
ဂပြနျပွညျက အရငျလား…မွနျမာပွညျက အရငျလား…၊ အတူတူဘဲလား…။ (unicode)
ရေးသားသူ – ဌေးဇျော(အငျးဝ)
ငလငျြပညာရှငျမြားက မွနျမာပွညျရော ဂပြနျရော ငလငျြကွီးတှေ လှုပျတော့မယျလို့ ပွောနကွေပါတယျ။
ငလငျြဆိုတာ ဘယျပညာရှငျမှ လှုပျမဲ့အခြိနျမခနျ့မှနျးနိုငျကွပါ၊ ငလငျြလှုပျပွီးမှသာ တိုငျးတာလို့ ရကွပါတယျ။ သို့သျော ပညာရှငျအဆကျဆကျရဲ့ သုတသေနမှတျတမျးတှအေရ အနှဈ(၈၀)ကနေ အနှဈ(၁၀၀)အတှငျးမှာ (magnitude ၇အထကျ-၈-၉)လောကျရှိတဲ့ ငလငျြကွီးတှေ လှုပျခတျတတျတယျလို့ ပညာရှငျအမြားစုက သီအိုရီထုတျ ခနျ့မှနျးဆုံးဖွတျထားကွပါတယျ။ နောကျပညာရှငျတခြို့က အနှဈ(၁၀ဝကနေ ၁၆၀)အတှငျး တကြော့ပွနျ လှုတျခတျတတျတယျလို့ဆိုကွပွနျတယျ။ ဒီတော့ နှဈ၁၀၀-ပတျဝနျးကငျြအတှငျး တကြော့ပွနျ လှုပျခတျမှာတော့ ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျကွပါဘူး။
ဒီတော့ မွနျမာနဲ့ ဂပြနျမှာ လာတော့မယျပွောတဲ့ ငလငျြကွီးတှကေို လလေ့ာဖို့ လိုပါတယျ။ မွနျမာပွညျမှာ ငလငျြကွီးတှေ ဘယျနှဈခုနှဈက ဘယျလောကျပွငျးအားနဲ့ လှုပျခတျသှားသလဲလလေ့ာရငျ
၁ ။ ။ ၁၈၃၉ ခု၊ မတျ ၂၁ နဲ့ ၂၃ တုနျးက လှုပျခဲ့တဲ့ အငျးဝ ငလငျြ။ အငျးဝ၊ အမရပူရနဲ့ စဈကိုငျးတို့မှာ လူ ၃ဝဝ-၄ဝဝ သတေယျ။ မွို့ရိုးပွာသာဒျနဲ့ နနျးတျောဟောငျးတှပွေိုတယျ။ မွို့ထောငျ့စတေီတှလေဲပွိုတယျ။ မငျးကှနျးပုထိုးတျောကွီး ပကျြ စီးတယျ။ နောကျဆကျတှဲ ငလငျြငယျတှေ ခွောကျလ လောကျဆကျလှုပျခဲ့သတဲ့။
၂ ။ ။ ၁၉၁၂ ခု၊ မေ ၂၃ မှာ လှုပျတဲ့ မမွေို့ငလငျြ။ J.C Brown (၁၉၁၄) က ဒါဟာကြောကျ ကွမျး ပွတျရှကွေ့ောငျ့လို့ပွော တယျ။ ရဈချတြာပမာဏ(၈) လောကျရှိတယျ။ လူနကြေဲပါး တဲ့နရောမှာ လှုပျခဲ့တာကွောငျ့ ပကျြစီးမှုနညျးတယျ။
၃ ။ ။ ကြောကျတနျးပွတျရှေ့ ကလညျး ၈ ဒသမ သုည ရဈချတြာစကေးရှိတဲ့ ငလငျြကွီးက ၁၉၁၂ ခုနှဈက လှုပျသှားဖူးတယျ။ ပွနျတှကျရငျ နှဈ ၁ဝဝ ကြျောသှားပွီ။ ဒါကလညျး တဈကြော့ပွနျလှုပျဖို့ နီးလာတယျ။ ဘယျပွတျ ရှကေ့ ဘယျနရောကနေ ဘယျလောကျပမာဏလှုပျမယျ ဆိုတာ ကွိုတငျခနျ့မှနျးလို့မရဘူး။
၄ ။ ။ ၁၉၃ဝ-မေ ၅ ရကျမှာ လှုပျ လိုကျတဲ့ ပဲခူးငလငျြ။ ရဈချတြာပမာဏ ၇.၃ ရှိတယျ။ ပဲခူးမွို့တောငျဘကျ မိုငျ ၂ဝ လောကျကို ဗဟိုပွုတယျ။ လူ ၅ဝဝ လောကျ သကွေခေဲ့တယျ။ ဒါဟာ စဈကိုငျးပွတျ ရှရေဲ့ ရုတျတရကျလှုပျရှားမှု ကွောငျ့လို့ဆိုတယျ။
၅ ။ ။ ၁၉၂၉ ခုနှဈကနေ ၁၉၃၁ ခုနှဈအထိ ငလငျြတှဆေကျတိုကျလှုပျခဲ့ဖူး တယျ။ လှုပျတဲ့ပမာဏတှေ ကွညျ့ရငျလညျး ၇ ဒသမ သုည၊ ၇ ဒသမ ၃၊
၇ ဒသမ ၆ ရဈချတြာစကေး ရှိတဲ့ငလငျြကွီး တှလှေုပျခဲ့ဖူးတယျ။
အဲဒီတုနျးကလညျး ဘုရားပုထိုးစတေီတှေ ပကျြစီးခဲ့တယျ။
၆ ။ ။ ၁၉၅၆ ခု၊ ဇူလိုငျ ၁၆ ရကျမှာ လှုပျသှားတဲ့ စဈကိုငျးငလငျြ။ ရဈချတြာပွငျးအား-၇ ရှိ တယျ။ လူ ၅ဝ လောကျသေ ပွီး စဈကိုငျးမွို့လဲ တျောတျော ပကျြသှားတယျ။
၇ ။ ။ ပုဂံငလငျြ။ ၁၉၇၅ ခု၊ ဇူလိုငျ ၈ ရကျနမှေ့ာ လှုပျခဲ့တာ။ ပွငျး အား ၆.၈ ပဲရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရှေးဟောငျးဘုရား တျောတျောမြားမြား ထိခိုကျပကျြစီး သှားတယျ။ လူအသေ အပြောကျမရှိဘူး။
အထကျအညာဘကျကို လလေ့ာရငျ ၁၈၃၉-ခုနှဈ အငျးဝငလငျြလှုပျပွီးနောကျ ၁၉၁၂-ခုနှဈ မေ၂၃ မှာ လှုပျခဲ့တဲ့ မမွေို့ငလငျြဟာ ရဈခကျြတာပမာဏ(၈)ရှိခဲ့ပွီး၊ အဲဒီငလငျြနောကျ(အနှဈ၈၀-ပွညျြ့ပီးပါပွီ) (၂၀၀၀-ခုနှဈ)နောကျပိုငျး (၂ဝဝ၁ ခုနှဈ တာလငေလငျြ ( ၆ဒသမ ၈)၊ ၂၀၀၂-ခုနှဈ တောငျတှငျးကွီးငလငျြ(၆ ဒသမ ၈)၊ ၂ဝ၁၂-ခုနှဈသပိတျကငျြးငလငျြ(၆ ဒသမ ၈)၊ ၂၀၁၆ခုနှဈ ဩဂုတျ ၂၄ ရကျ ညနေ ၅ နာရီ ၄ မိနဈ ၅၅ စက်ကနျ့(၆ဒသမ၈)ရှိကွတဲ့ ငလငျြအလတျတှေ အထကျအညာဘကျမှာ လေးကွိမျလှုပျခတျခဲ့တဲ့ ငလငျြတှရှေိခဲ့တာကွောငျ့ ငလငျြကွီးကွီးတှေ မလှုပျနိုငျတော့ဘူးလို့ တထဈခသြတျမှတျလို့ မရပမေဲ့ နညျးနညျးတော့ စိတျသကျသာရာရသလို ခံစားနိုငျပါတယျ။ (ဟိဟိ အတ်တနဲ့ ကိုယျ့ဘကျကို ပေါ့တှေးတာ)
အောကျမွနျမာနိုငျငံဘကျကို လလေ့ာရငျ ၁၉၃ဝ-ခုနှဈ မေ ၅ ရကျမှာ စဈကိုငျးပွတျရှကေ့လှုပျခတျခဲ့တဲ့ ပဲခူးငလငျြဟာ ရဈချတြာပမာဏ ၇.၃ ရှိတယျ။ ပဲခူးငလငျြကွီး လှုပျခတျပွီးနောကျ ကွီးကွီးမားမားငလငျြကွီးတှေ တခါမှ မလှုပျခတျသေးတော့ ပညာရှငျတှရေဲ့ မှတျတမျးမြားအရ အောကျမွနျမာပွညျက အတျောစိုးရိမျသတိထားရမဲ့နှဈတှကေို ရောကျနပေါပွီလို့ ပွောနကွေပါတယျ။
ဂပြနျမှာလဲ ငလငျြပညာရှငျတှကေ တိုကြိုဒသေအနီးတဝိုကျမှာ ငလငျြကွီးလာတော့မယျလို့ တှကျဆထားလို့ ဆောငျရနျရှောငျရနျတှကေို သတိပေးနကွေပါတယျ။
ဂပြနျရှိတဲ့ မွနျမာသံရုံးကလဲ ဂပြနျရောကျမွနျမာတှကေို ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွဖို့ နှိုးဆျောထားပါတယျ။ (ပူးပေါငျးဆောငျရှကျပေးပါရနျ ထပျမံဖိတျချေါခွငျး
၁။ ဂပြနျနိုငျငံရောကျ မွနျမာနိုငျငံသားမြားအား သဘာဝဘေးအန်တရာယျမြား ကွုံတှရေ့သညျ့အခြိနျတှငျ မွနျမာ သံရုံးအနဖွေငျ့ ထိရောကျစှာ ကူညီဆောငျ ရှကျပေးနိုငျရနျနှငျ့ ကောငျစဈ လုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ လညျးကောငျး၊ မွနျမာ နိုငျငံသား မြားအကြိုး ကာကှယျစောငျ့ရှောကျ ရာတှငျ လညျးကောငျး ထိရောကျ လငျြမွနျစှာ ကူညီဆောငျရှကျပေး နိုငျရနျ အတှကျ ရညျရှယျပွီး ဂပြနျ နိုငျငံရောကျ မွနျမာ နိုငျငံသားမြား စာရငျးကို မွနျမာသံရုံး၊ တိုကြိုမှ ပွုစုလကျြရှိပါသညျ။)
ဒီတော့ ဂပြနျက ဘယျလိုကွောငျ့လဲ ဂပြနျဆိုတာ ငလငျြကြောရှိတဲ့ ကြှနျးတှမှော နထေိုငျကွလို့ ငလငျြ အငယျ အလတျတှေ လှုပျခတျတာ အထူးအဆနျး မဟုတျတော့ပါ။ ငလငျြကွီး လှုပျခတျလာရငျတော့ ဘယျလိုနမေလဲ လှနျခဲ့တဲ့အနှဈတဈရာလောကျကနေ ပွနျလလေ့ာရလြှငျ
September 1, 1923 8.3 ML 1923 Great Kantō earthquake 大正関東地震(関東大震災) Taishō Kantō Jishin (Kantō Daishinsai)လို့ပွောတဲ့ ခနျးတိုးပလိပျနဲ့ ဟှနျရှုးပလိပျတို့ ပှတျတိုကျလှုပျတဲ့ တိုကြို ယိုကိုဟားမား ခြီးဘား ရှီဇူးအိုက ခနျနဂါဝဒသေတှမှော လူပေါငျး ၁၄၂၈၀၀ဦး သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီနောကျ လူ၄၂၈ဦးသဆေုံးတဲ့ တိုးယေားကဒသေမှ လှုပျတဲ့May 23, 1925 6.8 ML 1925 Kita Tajima earthquake 北但馬地震 Kita Tajima Jishin ငလငျြ။
လူပေါငျး၃၀၂၀ဦးသဆေုံးတဲ့ ကယောတို(ကြိုတို) တနျငိုးဒသေဘကျ လှုပျခတျတဲ့ March 7, 1927 7.6 ML 1927 Kita Tango earthquake 北丹後地震 Kita Tango Jishin ငလငျြ။
လူပေါငျး၂၇၂ဦးသဆေုံးတဲ့ ရှီဇူးအိုကခရိုငျ အိဇူးဒသေမှာ လှုပျခတျတဲ့November 26, 1930 7.3 Ms 1930 North Izu earthquake 1930年北伊豆地震 Sen-kyūhyaku-sanjū-nen Kita-Izu Jishin ငလငျြ။
လူပေါငျး၃၀၀၀ကြျော သဆေုံးတဲ့ အရှမွေ့ောကျအရပျ အီဝတဲ ခမအိရှိဒသေမှာ လှုပျခတျတဲ့ March 2, 1933 8.4 Mw 1933 Sanriku earthquake 昭和三陸地震 Shōwa Sanriku Jishin ငလငျြ။
အဲဒီနောကျ ၁၉၃၆- ငလငျြ၊ ၁၉၄၃- ၁၀၈၃ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၄၄- ၁၂၂၃ဦးသငေလငျြ၊
၁၉၄၅- ၁၂၈၀ဦးသေ ၁၁၂၆ဦးပြောကျဆုံးငလငျြ၊ ၁၉၄၆- ၁၃၆၂ဦးသငေလငျြ၊
၁၉၄၈- ၃၇၆၉ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၅၂- ၂၈ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၆၄- ၂၆ဦးသငေလငျြ၊
၁၉၆၈- မဂ်ဂနီကြု့၇.၅ငလငျြ၊ ၁၉၆၈- magnitude ၈.၂ရှိတဲ့ ၅၂ဦးသငေလငျြ၊
၁၉၇၄- ၂၅ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၇၈- ၂၈ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၈၃- ၁၀၄ဦးသငေလငျြ၊
၁၉၈၄- ၂၉ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၉၃- ၂၀၂ဦးသငေလငျြ၊ ၁၉၉၄- ၃ဦးသငေလငျြ၊
၁၉၉၅ခု ဇန်နဝါရီ၁၇×ရကျနမေ့နကျ၆-နာရီလောကျမှာ လှုပျတဲ့ 7.3 Mw Great Hanshin earthquake 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) Hyōgoken Nanbu Jishin (Hanshin-Awaji Daishinsai) ကိုဘေးမှာ လှုပျခတျတဲ့ ၆၄၃၄ဦးသဆေုံးတဲ့ငလငျြ၊
၁၉၉၈- ပွငျးအား ၈.၃ငလငျြ၊ ၂၀၀၁- ၂ဦးသငေလငျြ၊ ၂၀၀၃- ၁ဦးသငေလငျြ၊
၂၀၀၄- ၄၀ဦးသငေလငျြ၊ ၂၀၀၅- ၁ဦးသငေလငျြ၊
၂၀၀၅- ၂၀၀၆- ၂၀၀၇နှဈတှမှောလဲ လူမသတေဲ့ ပွငျးအား ၇-အထကျတှေ လှုပျခဲ့ပပါတယျ။
၂၀၀၇-မှာ ၁ဦးသတေဲ့ ငလငျြ၊ ၂၀၀၇- ၁၁ဦးသငေလငျြ၊ ၂၀၀၈- ၁၂ဦးသငေလငျြ၊
၂၀၀၉- ၁ဦးသငေလငျြနဲ့ လူမသတေဲ့ငလငျြ၊
၂၀၁၀-မှာ ၁ဦးသငေလငျြနဲ့ လူမသငေလငျြ၊ ၂၀၁၁-မှာ ပွငျးအား၇.၂ရှိတဲ့ငလငျြနဲ့
၂၀၁၁-ခုနှဈ မတျလ ၁၁-ရကျနကေ့ လှုပျခတျခဲ့တဲ့ The 2011 earthquake off the Pacific coast of Tōhoku (東北地方太平洋沖地震 Tōhoku-chihō Taiheiyō Oki Jishin?) wasamagnitude 9.0ငလငျြက ဆူနာမိလှိုငျးတှတေကျလာပွီး သဆေုံးသူ ၁၅၈၉၄ဦးစာရငျးကို ရှာတှပွေီး ရှာမတှတေဲ့လူတှေ အမြားအပွားရှိခဲ့တဲ့ ဖူကူးရှီမားငလငျြ၊
၂၀၁၁-ခုနှဈအတှငျး လူ၁၀ဦးသတေဲ့ ပွငျးအား ၇အထကျငလငျြ လေးကွိမျ လှုပျခတျခဲ့ပါသေးတယျ။ ၂၀၁၂-မှာ လူ၃ဦးသငေလငျြနဲ့ လူမသငေလငျြ၊ ၂၀၁၅-မှာ လူမသေ ၇.၈ငလငျြ၊ ၂၀၁၆- ဧပွီ ၁၄-ရကျနမှေ့ာ ပွငျးအား ၆.၂ရှိတဲ့ လူ၉ဦးသေ၊ နောကျ ဧပွီ၁၆-ရကျနမှေ့ာ ပွငျးအား ၇.၂ရှိ လူ၄၀သတေဲ့ ခုမမိုတိုငလငျြ နှဈကွိမျ လှုပျခတျခဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျမှာ ဒသေအမြိုးမြိုး ပလိပျအမြိုးမြိုးကနေ နှဈစဉျနှဈတိုငျး လှုပျခတျနတေယျလို့ မှတျယူလို့ရပါတယျ။
ငလငျြလှုပျခတျရာမှာ ပွငျးအား magnitude- မဂ်ဂနီကြု့အပွငျ မွအေနကျ ဘယျလောကျမှာ လှုပျခတျသှားတယျဆိုတာ အရေးကွီးပါတယျ၊ မွကွေီးအောကျ အနကျတိမျလေ ပွငျးအားကောငျးလပေါဘဲ၊ မွကွေီးအောကျ အနကျမြားရငျ ပွငျးအားပြော့သှားပါတယျ။
ဒီတော့ ပညာရှငျတှေ တှကျခကျြထားတဲ့ အနှဈ(၁၀၀)ပတျဝနျးကငျြမှာ ငလငျြကွီးတှေ ပွနျပျေါလာတတျတယျဆိုတော့ ၁၉၂၃-ခုနှဈ စကျတငျဘာ တဈရကျနေ့ တိုကြိုပတျဝနျးကငျြမှာ ပွငျးအား၈.၃အဆငျ့ရှိ လူပေါငျး၁၄၂၈၀ဦးသဆေုံးအောငျ လှုပျခတျသှားတဲ့ The Great Kantō earthquake (関東大震災 Kantō daishinsai?) struck the Kantō Plain on the Japanese ငလငျြကွီးမြိုး တိုကြိုဒသေတဝိုကျမှာ တကြော့ပွနျလာတော့မယျလို့ သတိပေးနခွေငျး ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာပွညျမှာလဲ မွနျမာပွညျတလြှောကျလုံးမှာ ဖွဈတညျနတေဲ့ စဈကိုငျးပွတျရှကွေ့ောငျးကွီးကနေ ၁၉၃၀-ခုနှဈ ပဲခူးငလငျြပွီးနောကျ တကြော့ပွနျလာနိုငျလို့ ပညာရှငျတှကေ တှကျဆသတိပေးနကွေပါတယျ။
ကမ်ဘာသူ ကမ်ဘာသားမြား ရနျအမြိုးမြိုးနဲ့ သဘာဝဘေးဒဏျတှကေ ကငျးဝေးနိုငျကွပါစေ။ ။
Previous post ကမ္ဘောဇသာဒီ ရွှေနန်းတော်ကြီးနှင့် ဘုရင့်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာ
Next post ကြွက်ကို ဆင်က တကယ် ကြောက်သလား နဲ့ ရှာရှာဖွေဖွေ ဗဟုသုတလေးများ